कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाको शिशु कहाँ छिन् ? – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिलाको शिशु कहाँ छिन् ?
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी पहिलो महिला सुत्केरी महिला हुन् । उनको धुलिखेल अस्पतालमा मृत्यु भयो । सिन्धुपाल्चोक घर भएकी २९ वर्षीया ति महिला सुत्केरी गराउन बैशाख २३ गते त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् । त्यसै समयमा कोरोना सरेको हुनसक्ने परिवारका एक सदस्यले जनाएका छन् ।
बैशाख २४ गते नर्मल डेरीभरी पछि स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएकाले उनलाई अस्पतालले बैशाख २५ गते डिस्चार्ज गरेको थियो । डिस्चार्ज भएको ८ औं दिनमा (बिहीबार) श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उनलाई स्थानीय अस्पतालमा लगिएको थियो । सोही क्रममा कोरोनाको लक्षणहरु देखिएपछि उनलाई आकस्मिक रुपमा बिहीबार धुलिखेल अस्पताल लगिएको थियो ।
सुत्केरीको मृत्युभएपछि धुलिखेल अस्पताललाई सील गरिएको छ । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई पनि आइसोलेसनमा राखेर कोरोना परीक्षण थालिएको छ ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पतालसम्म मृतक महिलाको श्रीमान र आमा सहित शिशु एकै एम्बुलेन्समा आएका थिए । उनीहरु सहित परिवारको अन्यमा पनि कोरोना संक्रमण भएको हुनसक्ने भन्दै सरकारले परिवारका सबैको स्बाव परीक्षणका लागी पठाइसकेको छ ।
शिशु कहाँ ?
मृतक महिलाले जन्माएको शिशु अहिले अस्पतालकै आईसोलेसनमा राखिएको बताइएको छ । परिवारका एक सदस्यका अनुसार शिशुलाई अस्पतालले बेवास्ता गरिरहेको छ । ‘हामीलाई नजिक जान पनि दिइएको छैन र बच्चाको राम्रो केयर गरेको देखिदैन’, परिवारका एक सदस्यले भने ।
कोरोना अपडेटः विश्वमा ८ लाख ७३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
एकान्तमा भेट्न बोलाएकी युवतीले यतिसम्म गरिन युवकलाई